Sanatar Yuusuf Geelle : Baarlamaanka Soomaaliya Waa In Ay Ka Hadlaan Xad Gudubyada Kenya – Kalfadhi
Sanatar Yusuf Geelle Ugaas oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Sare ayaa waxa uu cambaareeyay dhibtaada kufsiga iyo burburinta hantida shacabka isugu jirta ee ciidamad Kenya ay ka geysanayaan Gedo.
Xildhibaanka ayaa si gaar ah u sheegay dhibaatada ay ciidamadu ku hayaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo uu sheegay in si gaar ah ay u beegsanayaan ciidamada Kenya ilaha dhaqaalaha Soomaaliya.
“ Ciidamada Kenya ayaa tiro dhowr ah burburiyay Xarumo ay laheyd shirkadda Hormuud Telecom oo ay kamid ahaayeen xarumihii Ceelbaande, Dhamase, Khadiijo Xaaji , Dhegalaab iyo Dhuuntow oo ku wada tirsan Gobolka Gedo, waxayna xaruntaan hadda la burburiyay noqoneysaa middii lixaad oo ay ciidamada Kenya si bareer ah u gubeen” ayuu yiri xildhibaan Yuusuf isaga oo ka hadlayay burburinta ciidamada Kenya ay ku hayaan xarumaha shirkadda Hormuud.
Waxa uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya looga fadhiyo in ay go’aanno ka soo saaraan duqeymaha gobolka Gedo. Waxa uuna qoraalkiisa ku yiri “ Waxaan hoosta ka xarriiqayaa in arrintaan aan laga laaban karin indhaha ,balse tallaabo muuqata oo isla xisaabtan leh ay baarlamanka Soomaaliya labadiiisa aqal ka qaadan doonaan xad-gudubka Kenya “
Waxa uuna ugu dambeyn sheegay in ka tacsiyeynayo dadkii halkaa wax ku noqday.
Ciidamada Kenya ayaa dhawr dhawr jeer doqeymo ka geystay gobolka Gedo, kuwaas oo ay ku dhinteen dad shacab ah, qaar kalana ay ku dhaawacmeen. Duqeymaha waxaa wehliya kufsi iyo burburin hanti dadweyne.
Halkaan ka akhriso qaar ka mid ah xildhibaannada Baarlamaanka oo horay u cambaareeyay xad gudubyada Kenya.